Ciidamadda Dawladda oo ka cabanaya in looga been abuurtay Mushaaraad aan la siin. – Hornafrik Media Network
Ciidamadda Qalabka Sidda ee Somalia ayaa cabasho xooggan ka muujinaya Dacaayadaha ay Madaxda Dawladdu ku sheegteen inay bixiyeen 5 Bil oo Mushaar ah, taasoo ay ku tilmaameen Been abuur uga xanuun badan Mushaaraadka ka maqan.
Askari codsaday inaan Magaciisa loo adeegsan Warbaahinta ayaa sheegay in awalba iyagoo aan heli jirin Mushaaraad, hadda loogu daray been abuurasho sababtay in Qoysaskoodii ay isku dhacaan, loona qabsado Daymankii lagu lahaa, maadaama ay Dawladdu shaacisay in 5 Billood oo Mushaar ah la siiyay. Waxaana uu Askarigan ku dooday inay qaataan oo kaliya Mushaar 1 Bil ah.
Saraakiisha amniga dowladda ayaa madaxda dowladda ku eedeeyey inay kaga been abuurtaan warbaahinta oo ay ka sheegaan in 5 bil mushaar la siiyay laakiin ay been tahay oo hal bil kaliya ay qaateen inta kalana la meermeeriyay oo aan waxba la siin
Sirdoon ka madax Banaan NISA oo la diyaarinayo.